आगामी चुनाबमा माओवादीका शीर्ष नेता को कहाँबाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ? - Everest Dainik - News from Nepal
आगामी चुनाबमा माओवादीका शीर्ष नेता को कहाँबाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ?
काठमाडौ, असोज १३। अगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा (संघीय संसद) निर्वाचनका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारको नामको अन्तिम सूची तयार भएको उच्चस्रोत जनाएको छ ।
उम्मेदवार छनोटका लागि गठित कार्यदलले उम्मेदवारका नामवली तयार पारिसकेको छ । आगामी १६ गते बस्ने सचिवालय बैठकपछि उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गर्ने स्रोतले बताएको छ ।
याे पनि पढ्नुस देउबा सरकारलाई हाम्रो समर्थन जारी रहन्छ– माओवादी केन्द्र
नेता वर्षमान पुन नेतृत्वको कार्यदलले उम्मेदवारको सूची तयार पारेको हो । जसअनुसार प्रत्यक्षतर्फबाट चुनाव लड्ने शीर्ष नेतामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चितवन ३, रामबहादुर थापा बादल चितवन १, नारायणकाजी श्रेष्ठ गोरखा २ बाट चुनाबमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन ।
त्यसैगरी नेता वर्षमान पुन रोल्पा, कृष्णबहादुर महरा दाङबाट चुनाबमा प्रत्यक्षतर्फबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने छन । साथै अन्य शीर्ष नेताहरु पनि प्रत्यक्षतर्फबाटै चुनाब लड्न इभ्छुक देखिएका छन ।
याे पनि पढ्नुस वैद्य, बाबुराम र विप्लवलाई एकतामा आउन माओवादी केन्द्रको आव्हान
ट्याग्स: maoist center, Parliament Election